Kubantu abaningi, inkomishi yekhofi ekuseni - ke kuyinto efana isiko. Kuyasiza Tune isimo ukusebenza, athokozise futhi uhlale ajabule. Okwamanje, i-choice ikhofi ezisibangela, futhi wonke umuntu angakwazi ukuthola okuthile bona kule ezihlukahlukene. Ezinye brand Uthole okwandile kwakuqala ukwanda phakathi abalandeli inkezo noma ezimbili isiphuzo esishisayo kokuba magic walo enchanting. Lapha sikhuluma ikhofi "Nescafe Igolide" - izibalo emhlabeni nsuku zonke aphuze izinkomishi ezingu-80 naye.
Lolu shintsho lwaqala ngesikhathi yokuthi ukuthi inhloko yawo inkampani Swiss-Nestlé Louis Dapples ngo-1929 wathola isiphakamiso ekucubunguleni isitokwe yekhofi ezisuka kwenye ebhange, okuyinto has a inombolo enkulu izinto unsold eluhlaza ngakwesokunxele ngemva crisis stock market. Lokhu mass kumele reworked ku cubes encibilikayo yokuthengisa okwalandela komkhiqizo ukuze abathengi.
Kwakungenxa nje ngo-1938, u- Nestlé wethula ukukhiqizwa emikhulu yokuqala yekhofi osheshayo emhlabeni ngaphansi brand "Nescafe", by the way, leli gama lisuselwa emagameni amabili: Nestle kanye cafe. Ngu-1940, umkhiqizo seyenziwe emazweni angu-30. Manje ikhofi okuthengiswa emazweni angaphezu kuka-180. Ngonyaka ngosuku okwenzeka ngalo 75th of the brand uye phansi sina nomkhiqizi Ukuvuselela labetibambile emaphaketheni kabusha, ngaphezu kwalokho, izinguquko wathinta izinga ikhofi uqobo kanye umugqa enwetshiwe imikhiqizo ahlinzekwa. Nambithani isibe ethambile futhi enokulinganisela kakhudlwana, futhi manje iphunga isibe acebile. Coffee "Nescafe Igolide" siyinhlanganisela akhethiwe izithelo arabica futhi robusta umsuka ezahlukene eyosiwe ophansi.
Nescafe ikhofi izinhlobo
umugqa Igolide has a intengo ephakeme, njengoba kuqhathaniswa nezinye izinhlobo ikhofi encibilikayo, bangakunaki anda amandla ukusetshenziswa bumbela ubuchwepheshe.
Nescafe Igolide eziqinile - 100% yemvelo osheshayo ikhofi nqabela-omisiwe, okuyinto siyinhlanganisela enamandla elikhulu, okubandakanya okusanhlamvu yokuwugazinga ezijulile, ngaphezu kwalokho, it libhekene wokuqukethwe olukhulu robusta. Ifanele abalandeli elihlale umhluzi elimnandi. It has a ukunambitheka ocebile nge ukufutheka zasebukhosini.
Nescafe Igolide ezithambile kuyahluka caffeine kancane. Ithola ukunambitheka obucayi kunomthelela ukukhanya eyosiwe arabica ubhontshisi. Uzokhanga kulabo gourmets abangathandi amandla ngokweqile ikhofi.
Nescafe Igolide Decaf - ikhofi, esenziwe ngobuchwepheshe ekhethekile, iqukethe nengcosana-caffeine. It ikuvumela ukuba uzizwe ukunambitheka okugcwele iphunga the best wekhofi futhi uvumelane ngokuphelele kulabo abafisa ukuba anciphise ukusetshenziswa yalolu ketshezi.
Nescafe Igolide Green Blend kuhlukile ehlanganisa okugazingiwe ikhofi ubhontshisi, anikeza isiphuzo ukunambitheka ajwayelekile futhi iphunga ubhontshisi oluhlaza abacebile Antioxidants. ekugcineni Ingxube eqala ukuthanda othize, lapho babe ukunambitha gourmets kweqiniso.
Nescafe Igolide barista Stile kuyinto Intuthuko yamuva nje, ngokwethukela kuyanda phakathi ikhofi abatshali. Sihlanganisa zemvelo phansi wokusanhlamvu yokupheka okusheshayo isiphuzo encibilikayo. "Umhlabathi ku encibilikayo" - kulabo abafuna ukuzizwa ukunambitheka ikhofi asanda ukwenziwa.
"Igolide Nescafe": Izibuyekezo
Igolide eqinile ikhofi wadala for Labo abasiqaphelayo enqabeni isiphuzo futhi ukunambitheka kwako ocebile ezibabayo-sweet. Izibuyekezo lokhu ikhofi nqabela-omisiwe, Nokho, bathi ikhofi, naphezu igama, akanawo amandla kushiwo, has a kwephestri, ephethe ukunambitheka kancane ebabayo, ezahlukene iphunga te futhi ecebile. Zonke okusanhlamvu ikakhulu esikhulu "thuli" waphawula. Siqukethe elite corn izinhlobo amnyama eyosiwe Arabicas ngaphansi inqubo "nqabela-omiswe".
Abanye abathengi bathi unesikhundla efile ukunambitheka ambalwa ashisiwe, lwaqina nakakhulu kunangesikhathi esifanayo Nescafe Classic. isiphuzo Lapho ukwenziwa etholwe brown ocebile. Uba zinambitheke ngayo ubisi. Abathengi ukugubha wentengo ephakeme kuqhathaniswa nezinye brand of ikhofi.
Abanye abantu ababezama Nescafe Igolide barista Stile, abonisa ukuthi ikhofi akuyona sihluke kakhulu nezinye izinhlobo amelwe uhlelo. Nokho, kukhona labo abathi ukuthi lokhu kungahle ikhofi best ochungechungeni. Fans of the brand bathi isiphuzo has a ukunambitheka omnene nokusikisela asanda zekhofi. Yena licace, acebile futhi zemvelo ezingaphezu kuka encibilikayo ezivamile. Ngo inombolo encane asele izinhlayiya undissolved ka zekhofi, okuyisibonakaliso ezinhle. Wayengekhona enamandla kakhulu, kodwa inikeza umuzwa ngokwenama, ngisho njengoba injalo emsulwa, ngaphandle kwalokho ubisi, kumnandi ukuba baphuze. Coffee abaphuza uthi elihle ezikhangayo emaphaketheni design, ngaphezu, okusanhlamvu kukhona embizeni mnyama, okusho ukuthi impahla yabo kuyokwenziwa ligcinwe sibonga isikhathi eside ukuvikeleka ukukhanya kwelanga.
Nescafe Igolide elithambile, izibuyekezo umthengi has mnene ukunambitheka obucayi ngokuhlanganisa ozolile nomnene arabica ubhontshisi yokuwugazinga. It has a ukunambitheka Velvety oluhambisana igama, nge-asidi ezahlukene.
Nescafe Igolide Decaf has iphunga avulekile kunobuciko kakhulu liphinyiselwe yekhofi, amanzi ashisayo ancibilikisa kahle. Nakuba okungukuthi dekofenizirovannym, ukunambitheka kanye nezinye izici akuhlukile ezinye izinhlobo isiphuzo, futhi uma ungazi ukuthi senziwa ubuchwepheshe ekhethekile, umehluko ayikwazi ukutholwa, - kufakazelwa ukubuyekezwa. Coffee has a ukunambitheka obucayi nokukhanya amanothi ezimibalabala.
Nescafe Igolide Green Blend kuyinto ephawulekayo ukuthi ihlanganisa kokubili ubhontshisi okugazingiwe oluhlaza, okuyizinto yinzuzo kakhudlwana impilo. Ngo sokuvela elimbudumbudu musa ihluke kwezinye izinhlobo Igolide, izinhlamvu aminyene futhi ezinkulu. Isiphuzo has a imnene, ukunambitheka obucayi Velvety, futhi ine touch engavamile alube. Njengoba kuphawuliwe, labo kakade wazama it, it has a ukunambitheka okumunyu, kodwa kwalokho ubisi ukunambitheka siyahluka kakhulu futhi kuba mnandi nakakhulu e injalo elicwengekileyo.
Inikeza umuzwa ngokwenama, kodwa usebenza kamnandi kakhulu. Lokhu kukhetha athandwa kakhulu nabesifazane, ngoba ukubhala ukubuyekeza kwabo. Umenzi lithi ikhofi iqukethe inqwaba Antioxidants, ngaphezu, kuthuthukisa kwesisindo ngenxa ukuncishiswa esiphawulekayo esesuthi, kodwa yebo, hhayi umhlaba wonke. Kuwufanele ethi labo abathanda ikhofi namandla, lokhu kukhetha asihambisani kahle.
Abaningi babhekisela eminyakeni emazwini abo yokuthi ngaphambi ikhofi kwaba ungcono manje. Ngandlela-thile, kodwa manje abalandeli Ziningi ikhofi. ikhofi esheshayo "Nescafe Igolide" - sha-premium, umnikazi wazo kuyinto nomkhiqizi №1 emhlabeni ingxenye yayo kokubili eRussia futhi kwamanye amazwe.
Coffee ginger: Izibuyekezo unciphile nalabo badumazeke kule ndawo kwesisindo
Imfihlakalo amaphupho - amaphupho lokho ibhasi